ငယ်ရုပ်မပျောက်ပဲ ခုချိန်ထိတိုင်နုပျိုလန်းဆန်း လှရက်လွန်းနေတဲ့ ပြည်သူချစ်မင်းသမီးချော အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ ငယ်ဘ၀ပုံရိပ်များ – Cele Snap
November 21, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပြည်သူချစ် သရုပ်ဆောင် နိုင်ငံကျော် ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ အပီပိုင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူ ကျရာဇာတ်ကောင်တိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ပရိတ်သတ်ကြီးတွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာ ၊အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလောကမှာ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကောင်းပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ လျှောက်လှမ်းခဲ့တာ ယနေ့ထိ တိုင်ပါပဲ။
မင်းသားချောပြေတီဦးနဲ့အေးချမ်းသာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကို ထူထောင်ကာချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေနဲ့အေးချမ်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေမှာ ဆိုရင်လည်း အိန္ဒြာကျော်ဇင် က ပြည်သူလူထုနဲ့တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်.။ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ဟာဆိုရင် နွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာလည်း တက်တက်ကြွကြွနဲ့လမ်းမပေါ်ထွက်ကာလွတ်လပ်စွာနဲ့ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတ ယ်။
ဒီလိုပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ပုဒ်မ၅၀၅ က နဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူသရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးနဲ့အတူ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ၁၈ ရက်နေ့က ပုဒ်မ (၅၀၅ က)နဲ့ အမှုဖွင့်ခံရတဲ့ အနုပညာရှင်တချို့ကို အမှုပိတ်သိမ်းကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ ထင်ရှားတဲ့အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ အကယ်ဒမီ ပြေတီဦး၊ အကယ်ဒမီအိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့တော့ မပါလာသေး ပါဘူး။အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကို မွေးမွေးကတည်းက “… အူဝဲ အူဝဲ…. ” လို့ ပီပီသသ အသံဆာဆာနဲ့ငိုခဲ့လို့ “အူဝဲ” ဆိုပြီး အိမ်ခေါ်အမည်လေးတွင် ခဲ့တဲ့ သူပဲဖြစ် ပါတယ်။
မအူဝဲက အသက် 44 နှစ်ကျော်နေပေမယ့်လည်း ဖက်ရှင်ဘုရင်မအဖြစ်အားလုံးကအသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံရသလို နုပျိုလှပပြီး ချစ်စရာကောင်းနေ တဲ့သူဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် မအူဝဲက နုဖက်နေပြီး ငယ်ငယ်ကတည်းက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်း မအူဝဲရဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းကပုံလေးမြင်တွေ့ရအောင်လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ်။
ပွညျသူခဈြ သရုပျဆောငျ နိုငျငံကြျော ထပျဆငျ့အကယျဒမီ အိန်ဒွာကြျောဇငျကတော့ အပီပိုငျနိုငျတဲ့ သရုပျဆောငျခကျြတှနေဲ့အတူ ကရြာဇာတျကောငျတိုငျးမှာ အကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျနိုငျတာကွောငျ့ ပရိတျသတျကွီးတှရေဲ့ခဈြခငျအားပေးမှုကိုအခိုငျအမာ ၊အပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့ မငျးသမီးခြောလေးပဲဖွဈပါတယျ။ အနုပညာလောကမှာ ရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယိုဇာတျကောငျးပေါငျးမြားစှာ ကို ရိုကျကူးခဲ့ပွီး အောငျမွငျမှုတှနေဲ့အနုပညာလမျးကွောငျးမှာ လြှောကျလှမျးခဲ့တာ ယနထေိ့ တိုငျပါပဲ။
မငျးသားခြောပွတေီဦးနဲ့အေးခမျြးသာယာတဲ့ အိမျထောငျရေးလေးကို ထူထောငျကာခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတှနေဲ့အေးခမျြးတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားသူလေးလညျးဖွဈပါတယျ။အခုလကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ နိုငျငံရေးအခွအေနတှေမှော ဆိုရငျလညျး အိန်ဒွာကြျောဇငျ က ပွညျသူလူထုနဲ့တဈသားတညျးရပျတညျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ.။ အိန်ဒွာကြျောဇငျ ဟာဆိုရငျ နှဦေးတျောလှနျရေးရဲ့လူထုလှုပျရှားမှုမှာလညျး တကျတကျကွှကွှနဲ့လမျးမပျေါထှကျကာလှတျလပျစှာနဲ့ဆန်ဒ ဖျောထုတျခဲ့ တာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုပါဝငျခဲ့တဲ့အတှကျကွောငျ့ ပုဒျမ၅၀၅ က နဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူသရုပျဆောငျ ပွတေီဦးနဲ့အတူ ဖမျးဆီးခံခဲ့ရပါတယျ။အောကျတိုဘာလ၁၈ ရကျနကေ့ ပုဒျမ (၅၀၅ က)နဲ့ အမှုဖှငျ့ခံရတဲ့ အနုပညာရှငျတခြို့ကို အမှုပိတျသိမျးကွောငျးထုတျပွနျခဲ့ပမေဲ့ အကဉျြးကခြံနရေတဲ့ ထငျရှားတဲ့အနုပညာရှငျတှဖွေဈကွတဲ့ အကယျဒမီ ပွတေီဦး၊ အကယျဒမီအိန်ဒွာကြျောဇငျတို့တော့ မပါလာသေး ပါဘူး။အိန်ဒွာကြျောဇငျကို မှေးမှေးကတညျးက “… အူဝဲ အူဝဲ…. ” လို့ ပီပီသသ အသံဆာဆာနဲ့ငိုခဲ့လို့ “အူဝဲ” ဆိုပွီး အိမျချေါအမညျလေးတှငျ ခဲ့တဲ့ သူပဲဖွဈ ပါ တယျ။
မအူဝဲက အသကျ 44 နှဈကြျောနပေမေယျ့လညျး ဖကျရှငျဘုရငျမအဖွဈအားလုံးကအသိအမှတျပွုခွငျး ခံရသလို နုပြိုလှပပွီး ခဈြစရာကောငျးနေ တဲ့သူဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ ဘယျအသကျအရှယျပဲဖွဈဖွဈ မအူဝဲက နုဖကျနပွေီး ငယျငယျကတညျးက အရမျးခဈြဖို့ကောငျးနတောဖွဈပါတယျ။ပရိသတျကွီးလညျး မအူဝဲရဲ့ ငယျငယျတုနျးကပုံလေးမွငျတှရေ့အောငျလို့ ပွနျလညျမြှဝပေေး လိုကျပါတယျ။
ခင်ပွန်းဖြစ်သူသားဂန်းကို အလုပ်များနေချိန်မှာတောင် လွမ်းနေမိတဲ့ အကြောင်းလေးကို ပြောပြလာတဲ့ ဘေဘီမောင်